DAAWO:-R/wasaare Khayre oo Deg-deg Isugu yeedhay Saraakiisha DF, AMISOM iyo Safiiro Miisaan Culus |
DAAWO:-R/wasaare Khayre oo Deg-deg Isugu yeedhay Saraakiisha DF, AMISOM iyo Safiiro Miisaan Culus
Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta kulan deg-deg ah isugu yeedhay Taliska Howl-galka AMISOM iyo dawlada Soomaaliya ka taageera amniga iyo la dagaalanka Argagaxisada.
Kulanka ayaa aad loogu falanqeeyay taageeridda qorsha uu diyaariyay taliska ciidanka xoogga dalka oo la doonayo in meleeshiyaadka Al-Shabaab looga saaro deegaanadda kamid ah dalka oo weli ay maamulaan.
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre oo kulanka ka sheegay in aan loo sii dul qaadan karin in kooxaha arxan-laawayaasha ah ay sii dhibaateeyaan dalka, waxana uu dhammaan ka qayb galayaasha kulanka ka dalbaday in dagaalka argagaxisada loo wajaho si wadajir ah laguna gacan siiyo dawladda sidii ay dalka oo dhan uga dhigi lahayd mid nabdoon.
Safiirrada Maraykanka, Ingiriiska, Midawga Afrika iyo safiir ku-xigeenka Midawga Yurub ee Soomaaliya iyo Taliyaha Hawlgalka AMISOM oo goob joog ka ahaa shirka looga arrinsanahay qorshaha Al-Shabaab looga saarayo dalka ayaa taageeray in si wadajir ah loo fuliyo qorshaha dawladdu soo bandhigtay ee lagu doonayo in dalka looga sifeeyo argagaxisada.
Hoggaanka dawladda Soomaaliya oo muhiimadda koowaad ay u tahay sugidda amniga mawaadiniinta Soomaaliyeed, maalkooda iyo gayiga Soomaaliya guud ahaan ayaa wada qorshe uu ku doonayo in lagu soo af-jaro ficillada gurracan ee kooxaha nabad-diidka ah ay ku diidanyihiin horumarka dalka, kuna bannaysanyaan dhiigga dadka Soomaaliyeed.